ဘရာဇီး vs ကိုလံဘီယာ - ကမ္ဘာ့ဖလားအရည်အချင်းများ | ဘောလုံးခန့်မှန်း | လောင်းကစားအကြံပေးချက်များ
+7/ 9584-983-763info@ဒါကြောင့်ccအီးrခets ကိုhoot ။coမီတာ
ပွဲစဉ်ရက်စွဲ: စက်တင်ဘာ 05 2017 | နောက်ဆုံးအပေါ် updated5စက်တင်ဘာလ 2017 တွင် 1:15 GMT +2| Viewed 4473 ကြိမ်.
ဘရာဇီး vs ကိုလံဘီယာ – ကမ္ဘာ့ဖလားအရည်အချင်းများ
ဘရာဇီး vs ကိုလံဘီယာ – ကမ္ဘာ့ဖလားအရည်အချင်းများ, ကိုလံဘီယာရက်အနည်းငယ်အကြာဗင်နီဇွဲလားဆန့်ကျင်အိမ်ကနေတစ်အောင်ပွဲရဖို့စီမံခန့်ခွဲဘူး, ဒါပေမယ့်အသင်းနေဆဲစားပွဲ၌ဒုတိယကိုလံဘီယာ၏မျက်နှာသာ ဝင်. ရသောရလဒ်များကိုနှင့်အတူအဆုံးသတ်သည်အခြားအသင်းများကိုကျေးဇူးတင်ဖြစ်နေဆဲ. ယခု, အဆုံးသို့မရောက်မှီတိုင်အောင်သုံးကျည်နှင့်အတူ, သူတို့ရရှိခဲ့နှစ်ဆယ်ငါးမှတ်ဖြင့်ဒုတိယများမှာ, play-off ထက်ရုံနှစ်ခုထက်ပိုသောအရာမဆိုအခြားရလဒ် ပို. ပင်ခက်ခဲသည်ဤစစ်တိုက်ရာတွင်သူတို့ဘဝစေမယ်လို့ကတည်းကသူတို့ရဲ့ပစ်မှတ်ဖြစ်နေဆဲဤနေရာတွင်အာဂျင်တီးနားနှင့်အောင်မြင်ခြင်းထားရှိ.
ဒါဟာနောက်ဆုံးရလာဒ်များကပြောပါတယ်အဖြစ်ဗင်နီဇွဲလားဆန့်ကျင်ပွဲစဉ်များထဲမှဆင်းရဲသားမဟုတ်သလိုခုခံကာကွယ်ကြဘူးကပြောသည်ရမည်ဖြစ်သည်, နှစ်ဦးစလုံးအဖွဲ့များတိုးတက်မှုအတွက်လျောက်ပတ်သောအခွင့်အလမ်းတွေကိုရှိခြင်းဟုရမည်ဖြစ်သည်အတူ, အိမ်အဖွဲ့သည်ဒီတစ်ခုအတွက်ယှဉ်ပြိုင်ရည်ရွယ်ချက်ကအများကြီးရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပါသော်လည်း, သူတို့တစ်နည်းနည်းနဲ့ကွင်းလယ်အတွက်သူတို့ခွရန်နှင့်တီထွင်ဖန်တီးမှုနှင့်အတူဘောလုံးကိုပိုမိုအရည်ကြည့်ရှု.
ကာကွယ် Stefan မက်ဒီနာ (10/0), ပါပလော Armero (68/2), Jeison Murillo (25/1), ကွင်းလယ်လူဒံယလေကတောရက်စ် (14/0), Macnelly တောရက်စ် (48/4) နှင့်ကားလို့စ် Bacca forward (41/13) ယခင်အနည်းငယ်ပွဲနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ဤနေရာတွင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ.
ဘရာဇီး, အခြားတစ်ဖက်မှာ, ယခုအချိန်တွင်တော်တော်ချော form မှာဖြစ်ဟန်, သူတို့ကစားနောက်ဆုံးတကျိပ်နှစ်ပါးသောအရာရှိတဦးကမီးခြစ်ထဲမှာတကျိပ်တပါးသောအောင်ပွဲများကတည်းက. ထို့အပြင်, ဘေးထွက်လမ်းအစောပိုင်းတိုက်ရိုက်ခြေစစ်ပွဲလက်မှတ်လုံခြုံထားပါတယ်, အစောဆုံးတပါးအမြိုးသားတစျဦးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းက secure အဖြစ်. သူတို့ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းယခုအချိန်တွင်သူတို့ကအကောင်းဆုံးအမေရိကန်တောင်ပိုင်းခြမ်းဖြစ်ကြောင်းပြသ, တဆယ်ပွဲကစားပြီးပြီးနောက်စားပွဲ၌သုံးဆယ်ခြောက်မှတ်ရှိခြင်း 11-3-1 ခြုံငုံစံချိန်.
သူတို့ဟာဒုတိယနေရာချကိုလံဘီယာအထက်တကျိပ်တပါးသောအချက်များဖြစ်ကြပြီးအကြောင်းကိုစိုးရိမ်ဖို့မလိုပါ, သူတို့သာရုရှားတိုက်ရိုက် ticker clinched ကတည်းက, ဒါပေမယ့်လည်းပထမဦးဆုံးအစက်အပြောက်လုံခြုံပါပြီ. ယခင်ဂိမ်းထဲမှာ, ဘရာဇီးအီကွေဒေါကိုကျော်အနိုင်ရပါပြီ 2:0 လုံးဝထိုက်ထိုက်တန်တန်ကနောက်ဆုံးအနားသတ်ပိုကြီးတဲ့တစျခုမဟုတျကွောငျးအံ့ဘွယ်သောအဖွင့်, သူတို့ကဂိမ်း၏နောက်ဆုံးမိနစ်နှစ်ဆယ်သို့မဟုတ်ဒါအတွက် Paulinho နှင့် Coutinho ထံမှရည်မှန်းချက်များနှင့်အတူအောင်ခြင်းလုံခြုံစဉ်.
ယခင်အနည်းငယ်ခေါ်ဆိုခ-ups မှနှိုင်းယှဉ်လျှင်, သူတို့ဆိုင်းငံ့နောက်ခံလူမာစဲလိုမှာရေတွက်မည်မဟုတ်ပါ (48/5), ဒါပေမယ့်လည်း Miranda defenders (40/1), ဒါဝိဒ်သည် Luiz (56/3), ကွင်းလယ်ကစားသမားဒီယေဂို (34/4), အော်စကာ (47/12) ကို Forward ဒေါက်ဂလပ်ကော့စ (21/3) နှင့် Robinho (100/28).
မူလစာမျက်နှာအဖွဲ့ကဒီမှာနေတဲ့အောင်ပွဲလိုက်ဖမ်းမည်ဖြစ်ပြီးကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုတော်တော်လေးဖျော်ဖြေမှုဘောလုံးကတိပေးထားကြောင်းအရာတစ်ခုခုရဲ့. အခြားတစ်ဖက်မှာ, ဘရာဇီးအသင်းကိုဧကန်အမှန်ယခင်ပွဲစဉ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်၎င်းတို့၏ကစားသမားကိုလှည့်ပါလိမ့်မယ်, သို့သော်တိုက်ခိုက်မှုအတွက်အရည်အသွေးအခြမ်းထက်ပိုပြီးအလွန်အန္တရာယ်များသောကျန်ရှိနေသေးသော. ယေဘုယျအား, ငါဒီမှာခုခံကာကွယ်ဂိမ်းကြည့်ဖို့ကယ့်ကိုအံ့သြစရာပါလိမ့်မယ်များနှင့်ရည်မှန်းချက်များဒီမှာအလေးသာအကြံပြုသောအရာကိုထက်ပင်ပိုမိုလွယ်ကူလာသင့်တယ်.